मनोबल अन्तर आत्माबाट उत्पन्न भई हाम्रो सम्पूर्ण अंगलाई चुस्त दुरुस्तका साथ अविचलित निरन्तर चलायामान गराउने एक उर्जा हो, शक्ति हो यति मात्र होइन दिव्य ज्ञान पनि हो । यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तयार रहन सधै मद्दत गर्छ । यसले आपत बिपतको बेला ठोस परिणाम दिन्छ र साथ पनि । मनोबल जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि काम लाग्ने, दिने हँुदा आजको दिनमा पनि यसको महत्व उच्च छ, आवश्यक पनि ।
विशेषगरी अझ यो युद्ध मैदानमा, खेलमैदानमा, ठूलो आपत बिपत र रोगविरुद्धको मोर्चामा यसको महत्वका साथै आवश्यक हुन्छ । आजको दिनमा विश्वव्यापी कोरोना रोगले हाम्रो गाउँ समाज परिवार तहसनहस बनाईरहेको अवस्थामा र यस रोगको कुनै वैज्ञानिक औषधी उपलब्ध नभएको अवस्थामा कोरोना बिरुद्ध बिजय प्राप्त गर्न एकमात्र उपचार भनेकै आत्माबल हो । यसै सन्दर्भमा यसको महत्वको चर्चा गरिएको हो ।
मनोपरामर्श किन चाहिन्छ ?
कुनै व्यक्ति वा समाज भय, डर, त्रास वा निरासामा बाँचिरहेको समाज वा व्यक्तिलाई मुक्त गरी सरल दैनिकी जीवनमा फर्काउँदै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तयार पार्ने कामलाई मनोपरामर्श भनिन्छ । मनोपरामर्शको आवश्यकता सबैलाई पर्न सक्दछ चाहे त्यो गृहिणी होस चाहे त्यो खेलाडी, व्यापारी, सिपाही, धनी गरिव, रोगी अशक्त । अहिलेको समाजलाई भयरहित बनाउन तमाम बिधि मध्ये मनोपरामर्श पनि एक पर्दछ । डर त्रास र मनोबल गिर्ने काम धेरै किसिमबाट उत्पन्न हुन्छन् ।
त्यसैले शारीरिक व्यायाम, आध्यात्मिक आदि कुराहरू तन–मनलाई भुलाउने सहायक माध्यम मात्र हुन् त्यसैले सोँचमा नै परिवर्तन जरुरी छ । आज म कोभिड बाट उत्पन्न भएको डर त्रास अनभिज्ञता को बारेमा किन मनोपरामर्श लिने भन्न चाहन्छु । कोरोना सम्बन्धि हामीलाई चाहिने भन्दा बढी ज्ञान भएर कि सहि सुचना ज्ञानको कमि भएर उत्पन्न भएको त्रास हो ? त्यस डर त्रास हटाउन आवश्यक ज्ञानको जरुरत हुन्छ राख्नुपर्छ ।
हामीलाई सामाजिक संजालबाट आवश्यक कुराहरू जस्तै ः उच्च मनोबल राख्नुपर्छ थाहाँ छ । हामीलाई के पनि थाँहा छ भने के खाने के नखाने, व्यायाम गर्ने कसरी गर्ने थाँहा छ तर हामी गर्दैनौँ भने तपाई सोँच्नुस तपाईं हामीलाई मनोपरामर्शको आवश्यक छ, उर्जा भर्ने मान्छेको आवश्यक छ । त्यसैले परामर्शले के गर्ने कसो गर्ने सिकाउने साथसाथै त्यस कामको लागि प्रेरित उर्जा भर्ने काम पनि गर्छ ।
फूटबलमा जित्न गोल चाहिन्छ चाहे त्यो राम्रो खेलोस या नराम्रो, त्यस्तै तपाई कोरोनालाई जित्न चाहानुहुन्छ भने मनोबलका साथसाथै पहिलो दिनबाट नै खानु व्यायाम गर्नुको विकल्प छैन चाहे तपाईको मुख मिठो होस या नहोस् । यस्तै यस्तै उत्प्रेणाका स्रोत हुन मनोपरामर्श परामर्श सर सल्लाह ।
अन्त्यमा, तिमीलाई घरपरिवारको माया लाग्छ कि लाग्दैन, तिमिलाई बाँच्न मन छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दा मलाई घरपरिवारको माँया लाग्छ बाँच्न मन छ तर रोगले च्यापेर हो नसकेर हो के गर्ने कसो गर्ने मलाई बचाउँ हार खादै छु भन्ने बिरामी अशक्तलाई हो मनोपरामर्श सल्लाह सुझाव आवश्क पर्ने ।
तर कसैलाई यही माथिको प्रश्न गर्दा मलाई बाँच्न मन छैन, डर मात्र लाग्छ, माँयामोह केही छैन, मलाई अर्ती उपदेश नदेउ भन्छ, निराश हुन्छ भने तपाई सोच्नुहोस उसलाई मनोपरामर्श होइन मनोचिकित्साको जरुरत छ ।
- (लेखकका नीजि विचार)
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ ८, २०७८, १२:१४:३३